သစ်ပင် | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > သစ်ပင်
The capital city of the State of Bahia, Salvador, is alive with African influence that can be seen in locally prepared dishes, ancient ceremonies and rituals that are still being conducted, as well as in the churches and schools of the area. Salvador has approximately 2,250,000 ဒေသခံများက, and is widely known as 'The City of Joy.' The history of Salvador can be traced back to 1549, when the city was founded byagroup of Portuguese settlers. During this time, Salvador was B...
Torrevieja ခုနှစ်တွင်ကြည့်ရှုပါထိုအပြုပါရန်အမှုအရာ, စပိန်
Alicante, စပိန်အတွက်ဗလင်စီယာခရိုင်အတွင်းဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့, အဓိကခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. ဤဒေသ၌သင်တို့၏အားလပ်ရက်အပေါ် sightseeing မရှိအဆုံးလည်းမရှိ. ခွောကျသနျးကျြောလှည့်ခရီးသည်များနှစ်စဉ်ကော့စ Blanca ရှာတွေ့, Alicante တည်ရှိရာ, အားလပ်ရက်များအတွက်စုံလင်သောအစက်အပြောက်. သူတို့ထဲကအများစုဟာ Alicante လေဆိပ်သို့ပျံသန်းနှင့်မြို့၌တရားတည်းခိုပျော်မွေ့, ထို့နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာ၌လေ့လာရေးခရီးယူပြီး. Alicante ၌တရား, သင်သည်များစွာသောပြတိုက်နှင့်သမိုင်းဝင်တည်ဆောက်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ...
Every New Year's Day, except when that holiday falls onaSunday and the Rose Parade is held on January 2nd, millions of viewers around the world enjoy the Rose Parade and think about Pasadena, ကယ်လီဖိုးနီးယား. The citizens of Pasadena are justly proud of this spectacular event and the fame it brings their beautiful city, သို့သော်, there is more to Pasadena than the Rose Parade.
When people hear about Rio de Janeiro, they often remember its beaches, beautiful women, natural beauty and its buildings. ရှိသည်, သို့သော်, an ugly side to Rio, the favelas. Today there are over 600 favelas in Rio, housing between 30 နှင့် 40% of the city's population of approximately6သန်း. Most do not have running water, sewerage systems, electricity or telephones. အကွောငျး 50% lack indoor toilets. Most favelados are extremely poor, supporting their families on less than $...
Traveling, be it just across state or to another country is alwaysagreat experience. To help people enjoy it rather than having an untoward incident such as losing one's passport or other items such as luggage, it is best to be prepared to avoid such things from happening. An essential item for any passenger traveling is the passport. ဤ, aside from cash and the tickets must be nearby at all times preferably inasmall handbag or purse for easy accessibility. If it is ...
ဈေးအပေါဆုံးတောင်တက်အဝတ်ကိုရှာပါ, ဆဲစတိုင်ကျောပိုးအိတ်. အဆိုပါချွေတာကျောပိုးအိတ်များအတွက်အနည်းငယ်ထောက်ပြ.
တခါတရံ, there isamagical time when mom, dad and the kids all have nothing on the schedule. In such times, I highly recommendatrip to Georgia for some fun.
တာဝန်-အခမဲ့အရည်, Gels, နှင့် Aerosol
10 Start ရန်အကြောင်းရင်းများ
အဲ့ဒါ – the popular holiday choice
Andalucia မှတစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်လမ်းညွှန်, စပိန်
1 / 201234567...20...နောက်တစ်ခု"နောက်ဆုံး»